China KN95 Dust Respirator Mask Kugadzira uye Fekitori |VTECH
KN95 Inodzivirira Mask-Yakavakirwa-mumhino zambukoTsanangudzo:
KN95 Inodzivirira Mask-Ekunze mhino bhiriji Tsananguro:
1. Geza maoko ako usati wapfeka mask, kana kudzivirira kubata maoko ako nemukati memask paunenge wakapfeka mask kuti uderedze mukana wekuti mask ive nehutachiona.
2. Kusiyanisa mukati, kunze, kumusoro uye pasi pemasikisi zvakajeka.
3. Usasvina mask nemaoko, KN95 mask inogona kungoparadzanisa hutachiona pamusoro pemasiki.Kana iwe ukasvina mask nemaoko, hutachiona hunonyorovesa mask nemadonhwe, izvo zviri nyore kukonzera hutachiona hwehutachiona.
4. Edza kuita mask uye chiso chive nekunamatira kwakanaka.Iyo yakapfava yekuyedza nzira ndeye: mushure mekupfeka mask, exhale nesimba, uye mweya haugone kudonha kubva kumucheto kwemask.
5. Mask anodzivirira anofanira kunge ari pedyo nechiso chemushandisi.Mushandisi anofanira kuveura ndebvu kuti ave nechokwadi chekuti mask inogona kunyatsobatanidzwa kumeso.Chero chinhu chiri pakati pendebvu uye padhi chisimbiso uye kumeso zvinokonzeresa kuti mask idere.
6. Mushure mekugadzirisa nzvimbo yemasikisi maererano nechimiro chechiso chako, shandisa chigunwe chemaoko maviri kuti utsikidze clip yemhino pamwe nepamusoro pemucheto wepamusoro wemasikisi kuti uite kuti ienderane nechiso.
Zvakapfuura: KN95 Dziviriro Yechiso Mask
Zvinotevera: White Nzeve-Loop Inoraswa Inodzivirira 3D Face Mask
Isiri-Yakarukwa Kn95 Mask